အတုယူမှားတဲ့ တို့မြန်မာတွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinion - Op-ed » အတုယူမှားတဲ့ တို့မြန်မာတွေ
Posted by Naung Taw Lay on Mar 12, 2012 in Opinion - Op-ed |6comments
“အရှင်ရုပ်ကစိုးနတ်မင်းကြီး ကျွန်တော့်သားလေးရဲ့ အမိုက်အမဲကို ဗွေမယူပါနဲ့ ကျွန်တော့်အိမ်မှာ အိမ်သာမရှိ တဲ့ အတွက် အရှင့်သစ်ပင်ခြေရင်းမှာ မစင်စွန့်မိပါတယ်” ဒီလိုတိုင်တည်ပြီးပြောစရာ အကွက် ကကြုံလာပြီ။ အရှင်လွှတ်တော် အမတ်မင်းများ ကျွန်တော်မျိုးတိုိ့ရဲ့ ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့ ကိုရီးယား မှိုင်းမိနေတာကို ဗွေမယူ ပါနဲ့ အရှင်တို့ရဲ့ “ မြန်မာ့အသံ၊ မြ၀တီ နဲ့ MRTV4 စတာတွေကနေ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို နေ့စဉ်ရက် စက် အပိုင်းအပိုင်း အတစ်တစ်လုပ်ပြီး ပြနေတဲ့အတွက် စမိပြီဆိုတာနဲ့ ဖြတ်မရတော့ပဲ ကြည့်မိပါတယ်။
ရုပ်ကစိုး နတ်မင်းကြီးလိုတော့ “အောင်မာ အောင်မာ” တော့မလုပ်နဲ့။ မြန်မာ့အသံ တို့ မြ၀တီတို့ ပြည်တွင်းရုပ် သံလိုင်းတွေကနေ မြန်မာတွေ အတုယူမှားအောင် လုပ်နေတာကို လွှတ်တော်အမတ်မင်းများလည်း သိတယ် တော့လုပ်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲက စရိုက်တွေကို ပုံတူကူးတာမှ အပျို လူပျိုတင်မဟုတ်တော့ပဲ အဖိုးကြီး အဖွားကြီးအထိဖြစ်လာတော့မယ်။ ပြောနေကြတော့လည်း လွှတ်တော်အတွင်းမှာရော အမျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ်မြင့်မားရေး၊ ယာဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေ နဲ့ တစ်လျှောက်လုံး ပြောလာခဲ့ကြတာ။ ဒီနေ့ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ အပျက်ပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင် ကြားက အတုယူမှားလို့ ပျက်နေတာတွေကို မသိရော့လေသလားပေါ့။ စဉ်းစားကြည့်မိတာပါ။ ကိုရီးယားကား ကြည့်သူတိုင်း မှိုင်းမိတယ်ဆိုတော့ ကိုရီးယားကြိုက်သူတွေထဲမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများလည်း ပါကောင်း ပါနေမလားလို့ စဉ်းစားမိပါသေးတယ်။
ကိုရီးယားတွေက အရမ်းတော်တယ်။ သူတို့ရဲ့ရုပ်သံလိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ TVXB ၊ DBSK နှင့် Tohoshinmi တွေဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူကြိုက်များတဲ့ ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေ ဖြစ်လာပြီလုိ့သိရတယ်။ တို့မြန်မာက လည်း အမျှော်အမြင်ကြီးစွာနဲ့ လက်နက်တွေနဲ့ သိမ်းပိုက်တိုက်ခိုက်ပြီး ကိုလိုနီပြုစရာမလိုပဲ ကိုယ်တိုင်က ကို ယဉ်ကျေးမှုကိုလိုနီအပြုခံနေတာလို့ မြင်ရတယ်ဗျာ။ သူတို့မှာ ဘာမှအပြစ်မရှိဘူးနော်။ ကိုယ်တွေက လက်ခံပြီး တော့ကိုလိုနီပြုခွင့်ပေးထားတာ။ သိသင့်ကြပါပြီ။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု မြန်မာ့ဓလေ့စရိုက်တွေ ကွယ်ပျောက် လာပြီဆိုတာကို လူကြီးမင်းများ နေရာက လူကြီးမင်းတွေ သိရှိပြီး ပြင်သင့် မပြင်သင့် တိုင်ပင်ကြပါအုံးလို့ ကျွန်တော်မျိုး လျှောက်ထားချင်တာပါဗျာ။ အောက်လူတွေကို ပဲ ပြင်ကြ ပြင်ကြနဲ့ ပြောနေလို့ ဖြစ်ဘူးလေ။ အထက်ကလည်း ဘာကြောင့် ဘယ်လိုပျက်တယ်ဆိုတာကို သိပြီး စပြင်ပေးမှ ဖြစ်မှာ။
ကိုရီးယားတွေမှာ အခြား အတုယူစရာတွေလည်း အများကြီး ရှိသေးတယ်။ ကိုရီးယားမှာ သံတမန်တာဝန် ထမ်းဆောင်ဖူးသူကတော့ “ကိုရီးယားတွေ အလုပ်လုပ်ကြတယ်။ ပညာကြိုးစားကြတယ်။ မိမိအလုပ်ရှင် အပေါ် သစ္စာစောင့်သိတာတွေကို အတုယူရမယ်” လို့ပြောတယ်။ နောက်ပညာရေးပေါ့။ ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံး ထဲက တစ်နိုင်ငံပဲ။ ဘာကြောင့်ချမ်းသာလာတာလဲ။ သူတို့တွေလဲ မြန်မာပြည်လိုပဲ စစ်မြေပြင်က နေကြိုးစားရုန်းကန်လာကြတာ။ နှစ်ပေါင်း ၃၅ နှစ်အတွင်းမှာ အချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံအဆင့်ကို ရောက်လာတာပဲ။ ဘာကြောင့်ချမ်းသာသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းချက်ရဲ့ အခြေခံက ပညာရေးကောင်းတယ်။ ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒကို အခြေခံတဲ့အတွက် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ အလုပ်သမားများဟာ လုပ်ငန်းအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု အထူးမြင့် မားတယ်။ သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံရှိ ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့အဆိုအရ ကိုရီးယားကျောင်းသားတွေဟာ အာရုံစူးစိုက်မှုအရှိဆုံးလို့ သိရတယ်။
ပြောရင် ရှည်မှာပါ။ တိုတိုချုန်းပြောရရင် မဟုတ်တာတွေကို ပုံတူကူးမပေးပါနဲ့။ နိုင်ငံတော်ကြီးကို ကမ္ဘာနဲ့ ယဉ်ဘောင်တန်းဖို့ ကြိုးစားနေတာဆိုရင် အမျိုးဂုဏ်ဇာတိဂုဏ်မြင့်မားဖို့ တကယ်လုပ်ဆောင်နေပါတယ် ဆိုရင် တစ်နှစ်တစ်ခါ ဆိုကရေးတီး လုပ်ပေးတာနဲ့တင်ပြီးရောလား။ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကမှာ မြန်မာ့လူမှုသဘာဝပတ် ၀န်းကျင်ကို အမှန်အကန် သရုပ်သကန်ဖော်ဆောင်နိုင်အောင် ကူညီထောက်ပေးဖို့လည်း စဉ်းစားကြ။ ရှေးဦးပထမ လွှတ်တော်အမတ်ကြီးများက ကိုရီးယားရုပ်ရှင်တွေကို မျှော်လင့်ချက်တွေပေးပြီး နေ့စဉ်ရက်စက် အပိုင်းပိုင်းအတစ်တစ် ပြသင့်မပြသင့် ဆွေးနွေးကြည့်စေချင်တာ။ မြန်မာမလေးတွေတိုပြီး ကပ်လာပြီ။ အမြင်ကောင်းတယ်ဆိုပြီး ကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ ကြည့်နေတဲ့အထဲမှာ လွှတ်တော်အမတ်ကြီးများ မပါပါစေနဲ့။ ကျောင်းသူကျောင်းသားအရွယ်တွေကို အပြစ်ဖို့နေကြမယ့်အစား ငါတို့ပုံသွင်းခဲ့တာကိုက မှားနေတာဆိုတာကို သိကြပါတော့။ မြန်မာတွေ အတုယူမှားတာ မြန်မာကိုခေါင်းဆောင်သူတွေ ပုံတူကူးမှားလို့ပါလို့ ဆိုပါရစေ။
About Naung Taw Lay
Naung Taw Lay has written2post in this Website..
View all posts by Naung Taw Lay →
ကောင်မလေးက ကောင်လေးကို ရည်းစားစကားပြောရတာနဲ့
ကင်ချီနဲ့ ထမင်းရောစားရတာနဲ့ ( ကိုနိဂမိ ဟိုတစ်လောက ကင်ချီအကြောင်းပြောပြဖူးပါတယ်)
သူတို့လို အိမ်ပြန်လာရင် လူကြီးမိဘတွေကို နှုတ်ဆက်တယ်
မင်္ဂလာဆောင်ရင် ရိုးရာဝတ်စုံကို အမြတ်တနိုးဝတ်တယ်။
မားက္ကတင်း သရူး အနုပညာ ….ဗျ..
ဦးနှောက်လေးတွေ လာလာ ဆေး နေတာ…
ကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ ကြည့်ကြ …
လိုက်လုပ် ကြ …
စကီလေးဒွေဘက်က ….အတိုဝတ် ဆိုးဂျုသောက် ပြီး
မူးမူးနဲ့ ….ရည်းစားစကားလာပြောမယ်ဆိုတော့ ..
ကိုရီးယားကားတွေ ကို ကြည့်တတ်ရင် အရမ်းကောင်းပါတယ်… ဗဟုသုတနဲ. လူနေမှုအဆင်အတန်း.. ဘယ်လိုအလုပ်တွေလုပ်နေကြလဲ… အ၀တ်အစားဝတ်ပြီး သူတို.လူမျိုးအချင်းချင်း ရိုးရာဝတ်စုံ အစားအစာ ဘယ်လိုတွေ အမွှန်းတင်ပြီး နိုင်ငံတကာက သိအောင် ဘယ်လိုလုပ်နေကြလဲဆိုတာ..
ရုပ်ရှင် ကြည့်သူတွေတင်မဟုတ်ဘူး ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတွေပါ အတုယူသင့်တာ သူများ ဇာတ်ကျောတွေကို မတူတူအောင်တုရိုက်တာလောက်က တော့ ဒို.တောင်လုပ်တတ်သေး ဟေဟေ..
ကဲ သားသားတို. မီးမီး တို. အတုယူမမှား အောင်ကိုရီးယားကိုကို သေသေချာချာလေး ဆက်ကြည့်ကြပေါ့ကွယ့်…
ခေတ်ဆန်လာတော့လည်း ခေတ်နဲ့အညီ လိုက်ရောညီထွေ ၀တ်စားဆင်ကြတာပေါ့ လို့ ဆင်ခြေပေးသံများကြားမိမလားမသိဘူး
ရုံးတတ်တော့ အလန်လေး (အလန်းလေး)
ရုံးက ဖယ်ရီမစီစဉ်ပေးဘူးဆိုရင်တော့ လခကောင်းတဲ့သူကတော့ တက္ကဆီလေးနဲ့ ရုံးကိုကျော့ကျော့လေးလာ။
တစ်ချို့ကျတော့ အိမ်ကထွက်လာကတည်းက လိုင်းကားတိုးစီးပြီး ရုံးကိုလာ ။။။
အတုယူမှားနေတာ သိကေမယ့် ပြုပြင်မဲ့လူက မရှိဘူးလေ
@ Naung Taw Lay
“…..သူတို့ရဲ့ရုပ်သံလိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ TVXB ၊ DBSK နှင့် Tohoshinmi တွေဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူကြိုက်များတဲ့ ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေ ဖြစ်လာပြီလုိ့သိရတယ်။ …..”
တစ်ခုခုတော့ လွဲနေတယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။
DBSK ရယ် Tohoshinki (Tohoshinmi မဟုတ်ပါ) ဟာ ကိုရီးယား ရုပ်သံလိုင်းတွေ မဟုတ်
သလို အဲဒီ ၂ ခုဟာ လဲ သက်သက်စီ မဟုတ်ပဲ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
DBSK = Dong Bang Shin Ki ဖြစ်ပြီး
Tohoshinki ကတော့ = Dong Bang Shin Ki ကို ဂျပန် အသံထွက်နဲ့ခေါ်တာပါ။
သူတို့ ဟာ အဆိုတော် အဖွဲ့ ပါ ။
သူတို့အဖွဲ့ ရဲ့Official Website က http://tvxq.smtown.com/ ပါ ။
ဆိုတော့ ….. TVXB ဆိုတာကိုလဲ မသိပါဘူး ။
TVXQ ဆိုတာရှိပြီး သူဟာလည်း အထက်က ဆိုခဲ့သလိုပဲ ဒုံဘန်းရှင်ဂီ တွေရဲ့Wbesite ပါပဲ ။
ဒီတော့ ၃ ခု စလုံးဟာ တခုထဲဖြစ်ပါတယ်။